စျေးပေါတဲ့ မီးဖိုတွေ၊ 2022 မှာ ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲ။ ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့ အပူပေးပါ။
မီးဖိုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ထားရာအခန်း၏ အပူချိန်ကို တိုးမြင့်စေသော ကိရိယာများဖြစ်သည်။ အအေးဆုံးအချိန်တွေမှာ နွေးထွေးနေဖို့ ကူညီပေးတယ်။ မီးဖိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ လောင်စာအမျိုးအစား အပူချိန် တိုးဖို့ သုံးတယ်။
ယခု Post တွင် တည်ရှိနေသော မီးဖိုအမျိုးအစားအားလုံးနှင့် တစ်ခုချင်းစီ၏ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။ ထို့အပြင် သင့်အနေဖြင့် စျေးနှုန်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ပိုမိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာသော ပစ္စည်းများအားလုံးကို သင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီတွင် သင့်အိမ်ကို အပူပေးရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးပေါသော မီးဖိုများ
ဆောင်းရာသီမှာ အအေးမမိစေဖို့ အကောင်းဆုံးမီးဖိုတွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ဤမော်ဒယ်များထဲမှ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို သုံးစွဲသူများ နှစ်ခြိုက်ကြပြီး ငွေတန်ဖိုးအရှိဆုံး မော်ဒယ်များဖြစ်သောကြောင့် သင်အောင်မြင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Orbegozo BP 5007 –... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 962 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
Orbegozo BP 0102 - မီးဖို ... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 253 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
Orbegozo BB 5000 - မီးဖို... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 432 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
အနက်ရောင်သစ်သားမီးဖို... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ5သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
မီးဖို 14 kW... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ3သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
AVANT AV7554 - မီးဖို... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ 145 သုံးသပ်ချက်များ သဘောတူညီချက်ကိုကြည့်ပါ။
အကောင်းဆုံး	Orbegozo BP 5007 –...
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Orbegozo BP 0102 - မီးဖို ...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Orbegozo BB 5000 - မီးဖို...
မီးဖို 14 kW...
AVANT AV7554 - မီးဖို...
အ လုံးလေးများမီးဖို ၎င်းတို့၏ ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ၎င်းတို့သည် နှစ်များတစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးစျေးမကြီးပါ။ မီးဖိုတွင် လောင်စာသိုလှောင်ရန် တိုင်ကီပါရှိပြီး ဤကိစ္စတွင်၊ ခဲပြား။ စက်ကို လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ တစ် ဦး ဝက်အူလောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်းထဲသို့တောင့်လှုံ့ဆော်ပေး အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ညွှန်ပြသည့်နှုန်းဖြင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားစေရန်။
အပြင်မီးခိုးခေါင်းတိုင်ချိတ်ဆက်ထားသည့် နောက်ပလပ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ထွက်လာသောအပူနှင့်အခိုးအငွေ့များ လောင်ကျွမ်းသွားပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် pellet မီးဖိုကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူလိုက်ပါ။
၎င်း၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ အခန်းတွင်းအပူပေး၍ မီးပြန်ပိတ်သည့်အချိန်များကို အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤမီးဖိုများသည် ဇီဝလောင်စာမီးဖိုများနှင့် အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့်၊ ဇီဝလောင်စာအမျိုးအစား။ ဆလင်ဒါငယ်ပုံစံဖြင့် သေးငယ်သော ဆလင်ဒါများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အလုံးနှစ်ကီလိုဂရမ်သည် ဒီဇယ်တစ်လီတာထုတ်ပေးသည့် တူညီသောအပူကိုပေးစွမ်းသည်။
၎င်းတို့သည် ယနေ့တွင်ရနိုင်သော အသက်သာဆုံး မီးဖိုများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လောင်စာသည် သစ်တောများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဇီဝလောင်စာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်သက်တာလုံး၏ ရိုးရာထင်းမီးဖိုများကို အခြေခံထားသော်လည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးသည်။ အတိုးတက်ဆုံးနည်းပညာ. ၎င်းသည် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး လောင်ကျွမ်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းတို့၏ လောင်စာသည် ဂေဟစနစ်နှင့် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းသည်။ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအရှိဆုံးနှင့် သန့်စင်သော အပူကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
အ သစ်သားမီးဖိုများ ၎င်းတို့သည် ရိုးရာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။. ဒါတွေက ထင်းကို လောင်စာအဖြစ်သုံးတဲ့ ကိရိယာတွေပါ။ ထင်းကို သစ်ပင်များမှ ရရှိသည်။ ၎င်း၏နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအများဆုံးမှာ ကျေးလက်ဒေသများ၏ မီးဖိုချောင်တွင်ဖြစ်ပြီး အခန်း၏အပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးကာ အပူပေးစွမ်းနိုင်သည်။
သာမာန်အားဖြင့်၊ သစ်သားမီးဖိုအားလုံးတွင် မီးခိုးခေါင်းတိုင်တွင် အဆုံးရှိသော ပိုက်တစ်ခုရှိပြီး လောင်ကျွမ်းမှုတွင် ထုတ်ပေးသောဓာတ်ငွေ့များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ညစ်ညမ်းသောလေကို ရှုရှိုက်ခြင်းအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
၎င်းတို့သည် မီးလျှံပေးသော အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အသုံးပြုရန် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် ပိုမိုစိတ်အပန်းပြေစေသည့် မီးဖိုများဖြစ်သည်။ မီးငြိမ်းရန် လေးနာရီခန့် ကြာနိုင်သော်လည်း၊ အပူကို နာရီ 20 ခန့်အထိ ကောင်းစွာထိန်းထားနိုင်သည်။ ထင်းမီးဖိုသည် ၉ နာရီခန့် လောင်ကျွမ်းပါက တစ်ညလုံးအတွက် လုံလောက်သော အပူပေးသည်။
သစ်သားမီးဖိုကို ဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ဤတွင်သင်သူတို့ကိုပိုမိုစျေးသက်သာရရှိလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသော ထင်းသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လောင်ကျွမ်းလိုပါက စိုထိုင်းဆ အနည်းငယ် ရှိရပါမည်။ သစ်သားခြောက်လေ လောင်ကျွမ်းလေ ပိုမြန်လေဖြစ်သည်။
ထွက်လာတဲ့ အပူကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ပေါင်မုန့်၊ ပီဇာ၊ အချို့သော တံကျင်နှင့် ကင်စသည့် အစားအစာအချို့ကို ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် မီးဖိုပါရှိသော ထင်းမီးဖိုများလည်း ရှိပါသည်။
၏ဒီဇိုင်း ဓာတ်ငွေ့မီးဖို သူတို့ကို ပိုထိရောက်မှု ရှိစေတယ်။ ဤအခါသမယတွင်အသုံးပြုသောလောင်စာ ဘူတန်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။. ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ အရင်တုန်းက လူတွေက သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဒါမှမဟုတ် ဘူတန်ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါတွေကို ဝယ်ဖို့ ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြတယ်။
သို့သော်လည်း ဤမီးဖိုအမျိုးအစားများသည် လက်ရှိတွင် အလွန်လုံခြုံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် တစ်လလျှင် အပိုစုဆောင်းငွေများ ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး အရေးပေါ်အချိန်မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဂက်စ်မီးဖိုများသည် အလွန်စျေးသက်သာသောကြောင့် ထင်ရှားသည်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများကို အသုံးချလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်။
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းတွင် butane ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါကို ထားရှိရာ ဖရိန်တစ်ခုရှိပြီး လောင်ကျွမ်းမှုအား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ခံဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ butane ဓာတ်ငွေ့ကို လေထဲတွင် အောက်ဆီဂျင်ဖြင့် လောင်ကျွမ်းစေပြီး အခန်းတွင်း အပူပေးသည်။
ဤမီးဖိုများကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည် (၎င်းတို့ကို ပိတ်ထားသရွေ့)။ ၎င်းတို့သည် အခန်းငယ်များကို လျှင်မြန်စွာ အပူပေးရန်အတွက် စံပြဖြစ်သည်။
ဤမီးဖိုအမျိုးအစားများကို ကောင်းစွာမသိသော်လည်း အလွန်ထိရောက်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့် တပ်ဆင်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အမျိုးအစားမျှ မလိုအပ်သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လောင်စာသည် အရည် (ပါရာဖင်) ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လောင်ကျွမ်းမှုသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်သည်။
၎င်း၏ အားသာချက်များထဲတွင် အခန်းတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုကို သယ်ယူရလွယ်ကူခြင်းနှင့် အပူအအေး မြန်ဆန်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အပူဓာတ်မှ ထွက်လာသည်။ paraffin မီးဖို လျှပ်စစ်အပူပေးစက်လောက် အာရုံမစိုက်ဘူး၊ အခန်းတစ်ဝိုက်မှာ ပျံ့နှံ့တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါက နှစ်သိမ့်မှုခံစားမှုကို ပိုကြီးစေတယ်။
အသုံးပြုသူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးနှင့် ဘေးကင်းမှုကြောင့် ပါရာဖင် သို့မဟုတ် ရေနံဆီမီးဖိုများကို ရွေးချယ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် paraffin မီးဖိုကို ၀ ယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။
အခြားမီးဖိုများစားသုံးမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက paraffin မီးဖိုသည် စားသုံးမှုအလွန်နည်းပါသည်။
အ လျှပ်စစ်မီးဖိုများ ၎င်းတို့သည် ခံနိုင်ရည်အား အပူပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ကို အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့် ဓာတ်ငွေ့ အမျိုးအစားကိုမျှ မထုတ်လွှတ်သောကြောင့် အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့် အသန့်စင်ဆုံး အပူကို ပေးဆောင်သည်။ အားနည်းချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးလာသည်။.
လျှပ်စစ်မီးဖိုများအသုံးပြုမှုမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နီးပါးဖြစ်ပြီး ခရီးတစ်ခုသွားလျှင်လည်း တစ်ခန်းမှတစ်ခန်းသို့ သယ်ယူရာတွင် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော် မကြာခဏအသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်မီတာခကို များစွာတိုးပေးသည့်အတွက် စုဆောင်းမှုမှာ မကောင်းပေ။
လျှပ်စစ်မီးဖိုများသည် အခန်းများကို အချိန်မှန် အပူပေးရန်အတွက် အမြဲတမ်း ဝယ်ယူမှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် အလေးချိန်နည်းသောကြောင့် ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။
အခန်းတစ်ခန်း သို့မဟုတ် နှစ်ခန်းတွင် အပူကိုအာရုံစူးစိုက်လိုပါက အိမ်၏အခန်းအားလုံးတွင်ပျံ့နှံ့ရန် အပူမလိုအပ်ပါက ၎င်းတို့သည် စံပြဖြစ်သည်။
မီးဖိုကိုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကိန်းရှင်များ
မီးဖိုအမျိုးအစားတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်မျိုးကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် အချက်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသည်-
ပထမအချက်မှာ မီးဖို၏ အနည်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အပူထုတ်နိုင်မှုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ မီးဖိုတစ်ခုတွင် ပါဝါပိုရှိလေ၊ လောင်စာပိုလိုအပ်လေ (သို့) လျှပ်စစ်မီး ပိုမိုသုံးစွဲလေ (လျှပ်စစ်မီးဖိုများတွင်)။
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖို၏လုံလောက်သောကယ်လိုရီပါဝါကိုသိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၏စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ပါဝါကို kW ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ စွမ်းအင် kW တစ်ခုစီသည် 8 စတုရန်းမီတာကို အပူပေးနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်။ ထို့ကြောင့် သင့်အိမ်သည် 80 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါက 10 kW သည် လုံလောက်ပါသည်။
ဘယ်မီးဖိုက သင့်အခြေအနေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို သိဖို့၊ အများဆုံးအသုံးပြုမယ့်အခန်း ဒါမှမဟုတ် တပ်ဆင်ရမယ့်နေရာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပင်မအခန်းသည် 30 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 20 စတုရန်းမီတာထက် အတန်ငယ်မြင့်သော ပါဝါကို အသုံးပြုရပါမည်။ မီးဖိုအသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ အထက်ဖော်ပြပါ kW ရှိ ရည်ညွှန်းဒေတာကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
မီးဖို၏တည်နေရာသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆုံးဖြတ်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်မယ့်အခန်းက အနွေးဆုံးဖြစ်ရင်၊ အဲဒါကို အချိန်နည်းနည်းပဲ သုံးရလိမ့်မယ်။. ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ၎င်းသည် အအေးဆုံးဖြစ်လျှင် မီးဖို၏စားသုံးမှုကို လျှော့ချရန် အခန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ရပါမည်။
မီးဖို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်၊ အထူးကောင်းမွန်သော insulation ပါသော အခန်း၏ တည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ၊ သို့မှသာ မီးဖိုမှ အပူကို နံရံများ သို့မဟုတ် ပြတင်းပေါက်များမှတစ်ဆင့် ဆုံးရှုံးသွားစေရန် ကြိုးစားပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် နံရံနှင့် မီးဖို သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် အရာဝတ္ထုများကြားတွင် နေရာ 40 စင်တီမီတာခန့် ချန်ထားရန် အရေးကြီးသည်။
မီးဖိုထားရာအခန်းတွင် အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် လေဝင်လေထွက်ရှိပြီး မီးခိုးထုတ်သည့်စနစ်ပါရှိရန် လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။
Windows နှင့် insulation များ
အိမ်တွင် insulation ကောင်းကောင်းနှင့် ဖန်နှစ်ထပ်ပြတင်းပေါက်ရှိပါက မီးဖိုသည် ပိုကောင်းပါသည်။ ထားခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ 30-40 စင်တီမီတာခန့်ကွာဟ မီးဖိုနှင့် မီးလောင်နိုင်သော အရာဝတ္ထုများကြား။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကိန်းရှင်အားလုံးကို သိရှိပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးမီးဖိုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သစ်သားမီးဖိုများသည် စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး အပူနှင့် သန့်ရှင်းလောင်ကျွမ်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထင်းဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲလောင်စာများဖြင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သူတို့တွင် မီးတောက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးဆောင်သည့် အလှဆင်အချက်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသော ဤအိမ်တွင်းရေးအငွေ့အသက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အနှစ်သက်ဆုံး အလှဆင်ရန် မော်ဒယ်များစွာ ရှိပါသည်။ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေထဲမှာ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ပါတယ်။ မည်သည့်အလုပ်မျှ မလိုအပ်ပါ။. မီးခိုးထွက်ပေါက်အတွက် ပြင်ပနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သာ လိုအပ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သံမဏိပစ္စည်းများနှင့် ရုန်းထနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် မီးဖိုများသည် ထင်းထက် ပိုကြီးသောနေရာများကို အပူပေးရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။
မြန်မြန်ဆန်ဆန် အပူသက်သာချင်ရင်တော့ စတီးလ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မီးဖိုကို ရွေးချယ်ပါ။ ပိုအားကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ အပူကို လိုချင်ရင် ပထမပိုင်းမှာ ပိုနှေး၊ သစ်သား၊ ဇီဝလောင်စာ သို့မဟုတ် ခဲမီးဖိုများကို ရွေးချယ်ပါ။
ထင်းအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုမိုထိရောက်သောမီးဖိုများပေးဆောင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များရှိပါသည်။
သစ်သားမီးဖိုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များကို ရှာဖွေသည်။ Rocal၊ Carbel၊ Hergom နှင့် Bronpi ကဲ့သို့သော။
Pellet မီးဖိုများကဲ့သို့သော နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များရှိသည်။ Lacunza၊ Ecoforest၊ Bronpi နှင့် Edilkamin။
ဂက်စ်မီးဖိုများကဲ့သို့ အားကောင်းသည့် အမှတ်တံဆိပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ DeLonghi နှင့် Orbegozo ။
Paraffin မီးဖိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအရည်အသွေးကောင်း / စျေးနှုန်းအချိုးနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ Qlima၊ Webber နှင့် Kayami။
လျှပ်စစ်မီးဖိုများသည် စီးပွားဖြစ်ပိုမိုထုတ်လုပ်လာသောကြောင့် အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အစရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေပါတယ်။ Orbegozo၊ Clatronic၊ Rowenta၊ Klarstein၊ Thermic Dinamics၊ DeLonghi နှင့် Taurus။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင့်အခြေအနေအတွက် အကောင်းဆုံးမီးဖိုကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို ခံစားရင်း အပူပေးရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ချွေတာနိုင်ပါသည်။
1 ဆောင်းရာသီတွင် သင့်အိမ်ကို အပူပေးရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးပေါသော မီးဖိုများ
2.1 အပူပန့်ပါသော အိတ်ဆောင်လေအေးပေးစက်
2.3 စားသုံးမှုနည်းသော ရေတိုင်ကီများ
2.6 Bioethanol မီးဖို
2.10 paraffin မီးဖို
3 မီးဖိုကိုရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကိန်းရှင်များ
3.5 Windows နှင့် insulation များ
Paraffin နှင့် ရေနံဆီမီးဖိုများ
အလုံးများနှင့် ဇီဝလောင်စာ မီးဖိုများ
Black Friday WiFi အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ
Cyber ​​​​Monday WiFi အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများ
ဈေးသက်သာသော မီးဖိုများ 2022 - သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - ကွတ်ကီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ